Prosas Profanas nke Rubén Darío | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Encarni Arcoya | | Ndị edemede, Abụọ
Otu n'ime omume ọma nke Ruben Dario Ọ bụ mmeghari metric na okwu ọnụ okwu nke o doro uri ekele maka ihe ọhụụ ya na mpaghara a, nke a na-eche karịa otu n'ime ọrụ ya, nke na-abụghị onye ọzọ karịa "Profane Prose". Akwụkwọ a, edeziri ma bipụtara na nke mbụ ya na Buenos Aires na 1896, na-anọchite mmeri nke ọgbara ọhụrụ na Rubendarian aesthetics yana oge nke plenitude.
Ihe ohuru na abiakwute anyi site na isi aka ya ebe obu na okwu a bu ihe o kwuru, o na-ezo aka na ufodu hinnosis nke a na-agu n’ime otutu Mass mgbe aguru ozi oma ahu, ya na okwu a na-adighi nma o jiri aka ya ju okwu nke mbu, si otua na anabata ihe oma n'otu oge a ụfọdụ ojuju kwupụta okpukpe ọdịnala katọlik.
Ọdịnaya nke akwụkwọ ahụ na-aga n'ihu na-egosi anyị ọdịiche siri ike ebe ọ bụ na, n'otu aka, ọ nwere ụzọ dị egwu nke ịgbanahụ site na mmekọrịta ọha na eze na-adịghị amasị ya, n'aka nke ọzọ ọ na-egosi omimi elekọta mmadụ, na ụdị dị ọcha nke ọrụ mbụ ya. N’ebe nile mebere “Prosas profanas” Darío na-ajụ ihe niile gbara ya gburugburu, dịka ndụ na ọnwụ, okpukpe nke ya, abụ, nka ...
Na mgbakwunye na ọnụnọ ndị Spain na isiokwu ụfọdụ dịka "Elogio a la Seguidilla" ma ọ bụ aka ya banyere Cid, ndị obi uto Ọ bụ otu n'ime isiokwu dị ukwuu nke ọrụ ụmụ nwanyị na-amata na ihe dị iche iche nke okike: ịdị ọcha nke nduru, anụ ọhịa nke agu, ihe egwu nke oke osimiri ...
O doro anya na anyị na-eche ihu otu n'ime isi ihe na-atụgharị abụ nke Hispanic, nke gbanwere kpamkpam mgbe e bipụsịrị nnukwu akwụkwọ a.
1 Gịnị bụ Puros Prosas pụtara?
1.1 Ọ bụ okwu ndị Rubén Darío ji eme ihe
2 Kedụ isiokwu ndị Prosas Profanas na-eme?
3 Gini bu uri nile dere ya?
Gịnị bụ Puros Prosas pụtara?
Profane prose nke Ruben Dario ọ bụ n'ezie usoro nke uri nke onye na-ede uri ahụ dere n'onwe ya na nke metụtara ụwa dị omimi na dị egwu. N'ime ya, ị nwere ike chọta ndị eze nwanyị, ndị eze, ndị isi, akụkọ ifo, na ọtụtụ akụkọ ifo ndị ọzọ.
E bipụtara akwụkwọ mbụ Prosas profanas na Buenos Aires na 1896, mana ọbụghị aha nke eji mara ya ugbu a, mana dịka "okwu liminal." Na mgbakwunye, ọ nwere naanị uri iri atọ na atọ kesara n'akụkụ asaa (nke ọ bụla n'ime ha nwere ọtụtụ abụ na-enye omimi miri emi n'akụkụ nke abụọ).
Agbanyeghị, onye ode akwụkwọ ahụ afọ ojuju kpamkpam, na Paris, na 1901, Rubén Darío wepụtara mbipụta nke abụọ nke akwụkwọ ya, na-agbakwunye poems 3 ọzọ ma gbanwee aha ya. Akụkọ ihe mere eme nke ụfọdụ abụ ndị a maara, dịka nke "Blasón", onye dere ya n'ezie na Madrid mgbe a na-eme otu narị afọ nke Columbus; ma ọ bụ "Colloquium nke centaurs", ebe ọ kwụsịrị na tebụl na La Nación ebe onye nta akụkọ, Roberto Payró, na-ede edemede.
Buru n'uche na maka Rubén Darío akwụkwọ a bụ otu n'ime ihe kacha mma ọ na-ede, Karịsịa n'ihi na n'oge ahụ ọ nọ n'isi ọrụ ya dị ka onye na-ede uri na ihe ọ bụla si n'obi ya pụta na-aga nke ọma. N'ihi ya, a na-ewere ya na e dere ya n'oge oge onye edemede. Ya onwe ya na-akọwa ya dị ka "Oge opupu ihe ubi ya."
Ma Prosas profanas na Azul, abụọ n'ime akwụkwọ ndị a ma ama na-ede akwụkwọ, na-eduga na isi ihe nke oge a, ma ị nwere ike ịhụ otú e si nwee nnukwu mgbanwe na izu oke na ntozu okè, yabụ ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa.
Ugbu a, kedu ihe Profane Prosas pụtara? Ọfọn, dị ka onye edemede, onye ọ bụla nke poems, na ọtụtụ n'etiti onwe ha, bụ abu, olu n'isiokwu ndi o mesoro n'oru ya. Ma o bu ihunanya, ihe okike, ndi nwanyi ... Okwu a bu "Prosas" ka ejiworị na Middle Ages ma ha na arutu aka n'otu uri n'asusu Latin nke bu onyinye nye Ndi Nso N'ihi nke a, o jiri okwu ahụ tinye okwu ahụ "adịghị ọcha" iji zoo aka n'okwu ụwa, ya bụ, ndụ ndị mmadụ na-adị kwa ụbọchị.
Ọ bụ okwu ndị Rubén Darío ji eme ihe
Rubén Darío bụ otu n'ime ndị ọkaibe n'oge a na-ede uri n'oge ya. Wayzọ o si kwupụta onwe ya dọọrọ uche gaa n'eziokwu ahụ bụ na e ji okwu mara ya ahụ nke ọma. N'ezie, n'agbanyeghị na ha nwere ike ghara ịghọta ya oge ụfọdụ, ndị ibu mmetụta nke okwu ya mere ka abụ ya tinye onye na-agụ ya ma ọ bụ onye na-ege ya ntị n'ebe ọ chọrọ, na-akpali mmetụta, mmetụta, wdg. Iji mee nke a, ọ napụtakwara okwu ndị a na-ejighị n'aka, nke ọbụna taa anaghịzi eji ya, n'agbanyeghị na amaara ha. Anyị na-ekwu, dịka ọmụmaatụ, nke "algazara", dị ka ihe dị egwu nke olu; ma ọ bụ "gbanye", na-aghọta ya dị ka ịkwanye ihe ma ọ bụ mmadụ.
Kedụ isiokwu ndị Prosas Profanas na-eme?
Ọrụ niile Rubén Darío bụ n'ezie akwụkwọ na-elekwasị anya n'ọtụtụ isiokwu na-agakarị na mkpịsị akwụkwọ ya, dị ka ụmụ nwanyị, ịhụnanya, agụụ mmekọahụ, nka, nchegbu, akụkọ ọdịnala ...
Mgbe ọ na-emetụ aka n'okwu gbasara ụmụ nwanyị, amaokwu niile nke Rubén Darío na echiche ya na-elekwasị anya na-efe onye ahụ ofufe, na-enwe mmetụta nke ịbịaru ya nso ma na-ekwupụta na ọ dị nro, dị nro, ịhụnanya dị ụtọ. Agbanyeghị, n'akụkụ nke eroticism, onye na-ede uri na-agbanwe, ọ na-aghọ ihe mgbe ochie ma na-elekwasị anya na mmetụta anụ ahụ, mkpa, ọchịchọ anụ ahụ.
N'ezie, ọ bụghị abụ niile na-elekwasị anya na isiokwu ndị ahụ, E nwekwara nchegbu maka mmadụ, maka ọnwụ, ihe na-eme ma ọ bịarute, na ọbụnadị banyere ihe omimi nke okike.
Banyere akụkọ ifo na ọrụ ya, ọ na-eji akụkọ ifo ndị a dị ka a ga - asị na ha bụ ngosipụta nke onye edemede ahụ n'onwe ya na - eche, ọ bụrụ "ịhụnanya" ma ọ bụ naanị ọhụụ uri nke ụwa dịka ọ na - ahụ. Ọ bụghị n'ezie na akwụkwọ ahụ sitere n'akụkọ ifo, ma ọ bụ na ọ na-akọ akụkọ ifo n'ụdị uri. N'ikwu eziokwu, ihe onye edemede ahụ na-eme bụ iji ndị akụkọ ifo ndị ahụ, wee mee ka mmetụta na onye nnọchianya maka ụfọdụ, na abụ nke ya, si otú a nweta ụdị anụ ahụ, jiri nlezianya na karịa ụdị ntụgharị ọrụ ya niile.
N’ikpeazụ, n’ihe metụtara isiokwu ụwa, etu ndị mmadụ siri metụta ibe ha, otu ha si ebi ndụ, onye edemede dere ya, maka ya, n’abụ nke ya, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe kacha mkpa. N'ezie, enwere nnukwu mgbanwe na Rubén Darío kemgbe Ọ na-esi n’abụ a na-achọghị ịma ma ọ bụrụ na abụ ya nwere mmejọ ma ọ bụ na akọwaghị ya nke ọma; Ichoro otutu ihe n'aka gi ma chọọ n’ime ọrụ ndị ahụ ka ha dịruo mgbe ebighị ebi.
Gini bu uri nile dere ya?
Dị ka e kwuworo na mbụ, mbipụta mbụ nke Prosas profanas na nke abụọ dị iche n'ụzọ dị ukwuu na nsonye 3, nke ikpeazụ, nke nsonye ọhụrụ. Yabụ, ndị mejupụtara akwụkwọ a bụ ndị a:
Profane prose (dika ngalaba, nwere ama ndi a):
Ọ bụ ikuku dị nro ...
Toonụ anya ojii Julia
Maka onye cuban
Maka otu ihe ahụ
Mba nke anyanwụ
Ire, missa est
Colloquium nke centaurs (dika ngalaba n’onwe ya). O nwere uri nke Colloquium nke centaurs nke 212 amaokwu.
Dịgasị (dị ka ngalaba). Ejiri poems ndị a:
Onye na-ede uri na-arịọ maka Stella
Na otuto nke ọsọ
Peeji na-acha ọcha
Symphony na Grey Major (uri kasị ochie nke ihe niile anakọtara).
Verlaine (dị ka ngalaba). Na poems:
Abụ nke ọbara
Ihe omumu nke oge ochie (dika ngalaba). Na poems:
Ala eze di n’ime (dika ngalaba na abu).
Ihe nke Cid (dika ngalaba na abu).
Dezires, layes na songs (dị ka ngalaba). Na poems:
Abụ, lovehụnanya ahụ anaghị anabata akụrụngwa
Di na nwunye gbasara
Amphoras nke Epicurus (dika ngalaba). Na poems:
Okwu nke nchi
Nwanyị ochie ahụ
Hụ ụda gị n'anya ...
Maka ndị na-achị ọchị
Nye Nna-ukwu Gonzalo de Berceo
Mkpụrụ obi m
M na-achụ ụzọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » "Prosas profanas" ihe ohuru nke Rubén Darío mere
Ọ dị m ka ọ bụrụ na m nwere ezigbo uto itinye ozi ahụ mgbe achọtaghị ya naanị na facebook anaghị ebipụta ya ma ọ bụrụ na enweghị
Zaghachi Ana Jacqueline
Ezi Ana, Umuaka ndia…. ha abaghị uru ...